Ikhabethe lokususa uthuli elihamba phambili le-Dry Dry kanye neFektri | Ukulingisa
Egumbini lokugaya, uthuli luyasakazeka ngenxa yethonya lokugeleza komoya okwenziwe ngesikhathi sokucubungula nokupholisha imikhiqizo yezinkuni. Uma kungekho zindlela ezifanele zokuvikela, uthuli luzodonswa ngqo emaphashini opharetha, okuzobeka engcupheni impilo yabasebenzi. Ngaphezu kwalokho, lapho uthuli lufinyelela endaweni ethile ethile, lujwayelene kakhulu nezimo ezinokuqhuma neziqhumane, okudala izinkinga zokuphepha komkhiqizo. Igumbi lokugaya luhlobo lwemishini yokuqoqa uthuli eyenzelwe futhi yakhiqizwa ekuphenduleni kulezi zinkinga. Phakathi kwabo, igumbi lokugaya lihlukaniswe laba igumbi lokugaya elomile negumbi lokugaya elimanzi, futhi ngayinye inezici zayo nobubanzi besicelo, futhi idinga ukukhethwa futhi isetshenziswe ngokuya ngesimo sangempela.
Igumbi lokugaya elomile lisebenzisa ukwakheka kwengcindezi okungekuhle, okuvumela uthuli negesi ukuthi kungene ebhokisini elingezansi ngesango lomoya bese kuhlunga ngegobolondo lokuhlunga. Ngenxa yemiphumela ehlukahlukene yegobolondo lokuhlunga, uthuli negesi kuyahlukaniswa. Uthuli luxoshwe ku-cartridge yokuhlunga, futhi igesi lidlula ku-cartridge yokuhlunga bese lingena ebhokisini eliphezulu kusuka ku-tube tube. Umoya ohlanziwe ungakhishwa ngqo ethekwini lomoya elibuyayo lomqoqi wothuli ukuqedela umjikelezo wohlelo lonke. Enkambeni yokuhlunga nokuhlanza uthuli negesi, njengoba isikhathi sanda, uthuli oluningi luya luqoqana ku-cartridge yokuhlunga, ngakho-ke ukumelana negobolondo lokuhlunga kuyanda kancane, futhi negesi edlula ku-cartridge yokuhlunga iyehla kancane kancane. Ukuze sikwazi ukuqoqa izintuli ukusebenza ngokujwayelekile, imishini ifakwe umshini wokuhlanza othomathikhi. Isilawuli se-pulse sithumela iziyalezo zokucindezela ama-valve control ngokulandelana, ukuvula i-valve yokushaya, nokwenza umoya ocindezelweyo esikhwameni somoya udlule ngepayipi lokushaya lomoya Ishubhu lifuthwa ku-cartridge ngayinye yokuhlunga ehambisanayo, futhi i-cartridge yesihlungi iyanda kakhulu ngaphansi isenzo sokuhlehla sesikhashana sokuhamba komoya, ukuze uthuli oluqoqwe ebusweni bekhebuli lokuhlunga liwe, igobolondo lokuhlunga livuselelwa kabusha, futhi uthuli oluhlanziwe luwele ku-ash hopper. I ash hopper usebenzisa isakhiwo push-donsa, futhi inqubo yokuhlanza iyashesha futhi elula. Ingxenye engenhla ifakwe ibhodi elothula umlotha ukuze kuqinisekiswe ukuthi lonke uthuli lubekwe endaweni yomlotha. Ngemuva kokuhlunga, ukusebenza kahle kothuli kungu- ≥99.5%, futhi ukugxila kokukhishwa kothuli kuyi- <80mg / m3.
(1) Igesi equkethe uthuli ingena ebhokisini lokuqoqa uthuli elingezansi lemishini yokugaya
ngesivalo se-vacuum ngaphansi kwamandla okudonsa we-fan, uthuli oluqinile lufakwa phansi ebhokisini ngamandla adonsela phansi, uthuli oluhle luhlungwa ngumgogodla wokuhlunga we-powder, futhi uthuli oluthile lunamathiselwe engxenyeni engaphandle yesihlungi se-powder umnyombo.
(2) Ebhokisini eliphezulu lezinto zokugaya, kufakwa into ehlehlisa ngaphezulu ngakunye
umugqa wezinto zokuhlunga impuphu. I-blowpipe ixhunywe kwisilinda somoya esicindezelweyo ngokusebenzisa
valve ishayela. Lapho isilawuli sivula i-valve ye-pulse, Umoya ocindezelwe ku-cylinder
iheha umoya ocindezelwe cishe izikhathi ezi-5 ~ 7 okwamanje ka -0.1 ~ 0.2S. Umoya udutshulwe ungene
into yokuhlunga impuphu ngomgodi wokujova iphiko ojikelezayo ophikisayo, nothuli
okunqwabelene ebusweni besihlungi sempuphu kungasuswa ngaphansi kokuphendula kwalo moya
(3) Lapho irowu powder isihlungi core yokuhlanza, isikhawu kwesikhathi esithile emgqeni olandelayo we
izinto zokuhlunga impuphu ukuhlanza ngamunye ngomjikelezo ngomjikelezo. Uthuli oluwela emgodini womlotha
ithuthwa maphakathi ngohlelo lokudlulisa oluzenzekelayo ngesikhathi sokusetha samahhala ku-
ibhokisi lokuqoqa uthuli ekugcineni.
Igumbi lokugaya elomile linezici ezilandelayo:
(1.) Idizayini yokusebenziseka okuphezulu, umqoqi wothuli angakwazi ukuzivumelanisa nokushintshashintsha okuningi ngohlobo lwegesi equkethe uthuli, futhi kungashintshwa ukwakhiwa okungekho esimweni ngokuya ngesimo somsebenzisi;
(2.) Ukwakhiwa okuhle kwamapayipi omoya, kanye nedivayisi efanayo yokusabalalisa umoya ngaphakathi, evumelana nokusatshalaliswa komoya;
(3.) Idizayini yokwakheka kwensimbi yonke ilungele ukuthuthwa nokufakwa kwemishini, futhi iqinisekisa ukunemba kohlelo kwemishini;
(4.) Split-room pulse-state-state state dust technology ukuqinisekisa ukuqina nomphumela wokususwa kothuli;
(5.) Umqoqi wothuli uyama nohlelo lokuzihlanza ukuze kuqinisekiswe isimo sokusebenza komqoqi wothuli; idizayini ekhethekile yomlotha yenza uthuli luthule ngaphandle kwezithiyo.
(6.) Ukugeleza kombhobho wokulinganisa wokugeleza okungajwayelekile okuhlukile ukuqinisekisa ukufafaza okufanayo;
(7.) Izindleko zokusebenza eziphansi kanye nenqubo yepharamitha elungiselelwe inqubo efanelekile ekumelaneni okuphansi, ekusebenzeni kahle nasekusebenzeni okuzinzile komqoqi wothuli, kunciphisa ukusetshenziswa kwamandla kohlelo, futhi kunciphise ngempumelelo ukulahleka kwezinto zokuhlunga nomsebenzi wokulungisa ;
(8.) Hlakulela izingxenye ezisezingeni eliphakeme nezakhi zokuthuthukisa ukuthembeka kokusebenza kwemishini nokunciphisa umsebenzi wokugcinwa.
Langaphambilini Emanzi ukugaya uthuli ukususwa iKhabhinethi
Olandelayo: Imishini esebenza kahle yokwelashwa kwegesi edonsa kanzima yomlilo
Khipha ku-internet Dry Masala Grinder
Umshini wokugaya owomile
Umshini wokugaya owomile wekhaya
Emanzi Futhi Dry Ukugaya Machine